बाइडेनको अध्यागमन प्याकेजः कसले पाउनेछन् ग्रिनकार्ड? कति बर्ष लाग्नेछ? नेपाली कति? « Khasokhas
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सपथग्रहणको पहिलो दिनमा नै बृहत अध्यागमन सुधारको प्याकेज सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने उक्त बिल कार्यान्वयन हुनका लागि संसदका दुबै सदनबाट पारित हुन जरुरी छ ।
बृहत अध्यागमन सुधार प्याकेज विस्तारमा अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर यो प्याकेजका केही मुख्य विषयहरु भने सार्वजनिक भएका छन् ।
यो प्याकेजको मुख्य विषय के के छ ? हामीले त्यसलाई बुंदागत रुपमा उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
यो प्याकेजको केन्द्रमा रहेको मुख्य विषय ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने नै हो । त्यसका लागि ८ बर्षको बाटो बनाइनेछ । अर्थात् उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न ८ बर्ष लाग्नसक्छ ।
योग्य कागजपत्रविहिनहरुले ५ बर्षमा अमेरिकाको ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नेछन् । सामान्यतया अरु व्यक्तिले ग्रिनकार्ड प्राप्त भएको ५ बर्षमा अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुने भएपनि प्याकेजले समेटेकाहरु भने ३ बर्षमा नै नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछन् । यसरी ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकता प्राप्त गर्दासम्म ८ बर्ष लाग्न सक्नेछ ।
निश्चित अवधिभन्दा अगाडि अमेरिका आएका कागजपत्रविहिनहरु पनि यो प्याकेज अन्तरगत ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताका लागि योग्य हुनसक्नेछन् । त्यसो भएमा निश्चित मितिभन्दा अगाडि अमेरिका आएका एसाइलम पेन्डिंग रहेका लगायत सबै कागजपत्रविहिनहरु ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताका लागि योग्य हुनसक्नेछन् ।